आधा दर्जन गाउँ डुबानमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
आधा दर्जन गाउँ डुबानमा
असार ३०, २०७६ प्रदेश २ ब्युरो
जनकपुर — प्रदेश २ मा बाढी र डुबानमा १० जनाको मृत्यु भएको छ । लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढीमा धनुषा, रौतहट, बारा र पर्सामा २/२ जना र महोत्तरी, सिरहामा १/१ जना गरी १० जनाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ । डीएसपी ज्ञानकुमार महतोका अनुसार प्रदेशका ८ जिल्लामा १० जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ जना बेपत्ता छन् ।
धनुषाको जनकनन्दनी र चारनाथमा दुई पुरुषको शव फेला परेको छ । दुवैको डुबेर मृत्यु भएको अनुमान छ । वीरगन्ज–१३ का १४ वर्षीय अनुप पटेलको शव सबैठा खोलामा फेला परेको छ । पर्साको पर्सागढी–१ का १० वर्षीय निखिल पटेलको सिंग्याही खोलामा बगेर मृत्यु भएको छ । बाराको परवानीपुर–१ का अरविन्द यादवका १८ महिने छोरा विक्कीको घर पछाडि जमेको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको छ ।
बाराको कलैया–१३ मा बाटो बनाउन खनिएको खाल्डोमा डुबेर स्थानीय १३ वर्षीय अजित साहको मृत्यु भएको छ । रौतहटको गौर–३ का ४० वर्षीय शिवमंगल पटेलको टिकुलिया नदीमा डुबेर मृत्यु भएको छ । गौरकै उमेश राउतको डुबेर मृत्यु भएको छ । बाख्रा चराउन गएकी सिरहाको मिर्चैया–४ की १० वर्षीया रागनीकुमारी महतोको खाल्डोमा डुबेर मृत्यु भएको छ । महोतरीको भंगहा–४ रातु खोलामा करिब १५ वर्षीय किशोरको शव फेला परेको छ ।
कमला नदीको पश्चिमी तटबन्ध भत्केर आएको भेलले जनकपुर–जयनगर रेल्वेको नवनिर्मित लिक भत्काएको छ । आधा दर्जन गाउँ डुबानमा छन् । घर डुबेका सयौं परिवारले विद्यालय र मठमन्दिरमा शरण लिएका छन् । नेपाल रेल्वेका इन्जिनियर विनोद ओझाका अनुसार खजुरी र इनर्वा रेल्वे स्टेसन बीचमा झन्डै ७० मिटर लिक बाढीले बगाएको छ । कमलाको भेल रेलवे लिक भएकै क्षेत्रबाट बगेको छ ।
जनकनन्दनी–१ मलहनियानजिक शनिबार कमला नदीको पश्चिमी तटबन्ध भत्केको थियो । कमला नदी सरोकार समूहका अध्यक्षसमेत रहेका कांग्रेस जिल्ला सचिव विशेश्वर यादवका अनुसार तटबन्ध भत्किँदा मलहनिया, इनर्वा, फूलबरिया, कठाल, बलहा, पतनुका र ढोलवज्जालगायतका गाउँ डुबानमा परेका छन् । फुसको छानो भएका दर्जनौं घर भत्केका छन् । इनर्वास्थित प्रहरी चौकीमा पानी पसेपछि सुरक्षाकर्मीको पनि बिजोग छ ।
विपद व्यवस्थापनबारे मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सुरक्षा निकायसित आइतबार बैठक गरेका छन् । बैठकमा सुरक्षा अधिकारीहरूले प्रदेशमा बाढीबाट भएको क्षतिबारे मुख्यमन्त्री राउतलाई बताएका थिए ।
विपद् व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लाइफ ज्याकेट, सोलार चार्जर र रबर बोट लगायतका उद्धार सामग्री आवश्यक भएको सुरक्षा प्रमुखहरूको भनाइ थियो । उद्धारपछि राहत वितरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री राउतले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी, मन्त्रालयहरूका सचिव, सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रदेश प्रमुखको सहभागिता थियो । प्रदेश सरकारले राहत वितरणका लागि आठै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई १०/१० लाख, मृतक परिवारलाई ३/३ लाख आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
माछापोखरीमा धेरै क्षति
बाढी र डुबानले माछा र कुखुरापालन गरेकाहरूलाई करोडौंको नोक्सानी पुर्‍याएको छ । जनकपुरमा आइतबार सरकारी अधिकारीहरूले प्रदेश २ मा माछापालनको क्षेत्र ७० प्रतिशत क्षति पुगेको आँकडा प्रस्तुत गरे । बाढी र डुबानले करिब ११ हजार पोखरीको माछा बगेको जानकारी कार्यक्रममा दिइयो ।
प्रदेशमा १५ हजार ६ सय ६७ पोखरीमा व्यावसायिक माछापालन हुन्छ । माछा पालिएको बाराका २ हजार ४ सय ८१, सप्तरीका १ हजार ८ सय ७९, धनुषाका १ हजार ६ सय ४७, सिरहाका १ हजार ६ सय १५ र महोत्तरीमा १ हजार ९ सय ३५ पोखरीमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । सर्लाहीका ९ सय ८७ र रौतहटमा ९ सय ३७ वटा माछापोखरीमा क्षति पुगेको छ ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ । धनुषाको हंसपुर–२ मा रहेको सिंह माछा तथा कृषि केन्द्रको २ हजार ५० वटा कुखुरामा क्षति पुर्‍याएको छ । केन्द्रका सञ्चालक बिमलेश सिंहका अनुसार बाढी र डुबानले दुईवटा पोखरीको माछा पनि बगाएको छ ।
घर र गोदाम डुबानमा
वीरगन्जको आदर्शनगरमा शनिबार बिहानैदेखि मुख्य सडकमै खोलाजस्तो भेल बग्यो । घर, पसल र गोदाममा पानी पसेपछि यस क्षेत्रका व्यवसायीले करिब २ करोड रुपैयाँको क्षति भएको बताएका छन् ।
बाँके बिहारी इन्टरप्राइजेजका व्यवस्थापक दिगम्बर सिंहले गोदाममा पानी पस्ता करिब १७ लाखका कम्प्युटर उपकरण नष्ट भएको बताए । श्याम इन्टरनेसनल एन्ड सप्लायर्सका व्यवस्थापक सौरभ चौधरीले करिब ७ लाख रुपैयाँका रेडिमेड कपडामा क्षति पुगेको बताए ।
गौरको जनजीवन सामान्यतर्फ
वाग्मती र लालबकैया नदीमा आएको बाढी बस्तीमा पस्दा अस्तव्यस्त रौतहटको सदरमुकाम गौरमा जनजीवन सामान्य हुन थालेको छ । पानी घट्न थालेपछि मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्कन थालेका छन् । केही पसलहरू खुलेका छन् ।
पसल डुबानमा परेका अधिकांश व्यापारी आइतबार दिनभर पानी बाहिर फाल्न व्यस्त थिए । पानीको सतह झन्डै ७ फिट पुगेपछि सबैका पसल डुबेका थिए । सरकारी कार्यालयहरू धेरैजसो अझै बन्द छन् । भित्र पानी पसेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कागजपत्रमा क्षति पुगेको छ ।
गौरको भन्सार क्षेत्रका विस्थापित परिवार घर फिर्न सकेका छैनन् । उनीहरूलाई प्रदेश सांसद बाबुलाल साहले आइतबार राहत वितरण गरे । भारतीय पक्षले दसगजामा बनाएको बाँधको दुई ढोका खोलेपछि पानीको सतह घटेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले बताए । ‘निकास खोलिएपछि झन्डै ८० प्रतिशत पानी घटेको छ, उनले भने । प्रकाशित : असार ३०, २०७६ १०:२२
अन्नभण्डारमै कम रोपाइँ
प्रदेश २ का ८ जिल्लामा २ लाख ९४ हजार ८ सय ४० हेक्टरमा धान खेती हुने भए पनि यो वर्ष पर्याप्त वर्षा नहुँदा १५ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ भएको छ । सुक्खाले मकै र उखु खेतमै सुकिसके, किसान पानी पर्छ कि भन्दै आकाश ताकिरहेका छन् ।
असार २४, २०७६ प्रदेश २ ब्युरो
जनकपुर — प्रदेश २ लाई देशकै अन्नभण्डार मानिन्छ । प्रदेश सरकारले नारा दिएको छ, ‘हरेक खेतमा पानी, हरेक हातमा काम ।’ किसानको अवस्था भने फरक छ । पर्याप्त वर्षा नहुँदा यो प्रदेशका ८ जिल्लामा असार तेस्रो सातासम्म १५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । ८ जिल्लाको २ लाख ९४ हजार ८ सय ४० हेक्टरमा धान खेती गरिए पनि सिँचाइको अभावमा १५ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ भएको हो ।
त्यो पनि किसानले आफैंले सिँचाइको बन्दोबस्त मिलाएर रोपाइँ गरेका हुन् । प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार पर्याप्त पानी नपरेकाले रोपाइँमा ढिलाइ भएको छ ।
मन्त्रालयका अधिकृत रजनिश मिश्रले रोपाइँको गति सिँचाइ अभावले सुस्त रहेको बताए । ‘पम्पसेट, ट्युबवेलबाट सिँचाइ गरेर कतैकतै धान रोपिएको छ,’ मिश्रले भने, ‘वर्षाको आसमा किसान आकाश ताकिरहेका छन् । प्रदेश २ मा २५ प्रतिशत जग्गामा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । ८ जिल्लामध्ये धनुषामा सबैभन्दा कम रोपाइँ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धनुषाको ३५ हजार २ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । यहा अहिलेसम्म ५ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ भएको छ । वर्षा नहुँदा साना सिँचाइको सहयोगमा धान खेती भए पनि ठूलो क्षेत्रफलमा धान रोप्न बाँकी रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकृत मिश्रले बताए । मन्त्रालयका अनुसार पर्सामा १५, रौतहटमा २२, सर्लाहीमा १०, महोत्तरीमा १०, बारामा ३२, सिरहामा १० र सप्तरीमा १० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ ।
‘रोपाइँ ढिलो हुँदा उत्पादनमा कमी आउँछ,’ मिश्रले भने, ‘गत वर्ष समयमै वर्षा हुँदा साउनको दोस्रो सातासम्म ७८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । ढिलो रोपाइँले धानको दाना नलाग्ने खतरा हुन्छ ।’ प्रदेश सरकारले सिँचाइका लागि सानो ट्युबवेल, सोलारपम्प र बोरिङ वितरण गरे पनि सिँचाइका लागि यति नै पर्याप्त नभएको मन्त्रालयका सचिव विजयचन्द्र झाले बताए ।
रोपाइँकै बेला खेत सुक्खा
रौतहटमा वाग्मती सिँचाइ पुगेको क्षेत्रमा मात्र रोपाइँ भइरहेको छ । अन्य क्षेत्रका किसान अझै आकाशेपानीको भरोसामा छन् । मनसुन भित्रिए पनि पर्याप्त पानी नपर्दा किसान निराश छन् । रौतहटमा २२ प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपाइँ भइसकेको छ । यही समयमा गत वर्ष ५० प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । गौरस्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार यस वर्ष पानी नपरेकाले किसानलाई रोपाइँ गर्न समस्या छ । नहरको पानी र बोरिङबाट खेतमा पानी पटाएर रोपाइँ पनि भएको छ । चर्को घामका कारण धानका बेर्ना खेतमै सुक्न थालेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झाले समयमा वर्षा नहुँदा किसानले धान रोप्न नपाएको बताए । ‘यो समयमा धमाधम रोपाइँ हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘एक थोपा पानी परेको छैन । किसान कसरी रोपाइँ गरून् ?’
यहाँका किसानले आकाशेपानी, नहर, बोरिङ, पम्पसेटको मद्दतले रोपाइँ गर्छन् । वाग्मती सिँचाइले छोडेको पानीको भरमा अलिअलि रोपाइँ भएको हो । ज्ञान केन्द्रका अनुसार रौतहटको कुल ३४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । किसानले पछिल्लो समय मनसुली, कतर्नी, सावित्रीलगायत धानको बीउ रोप्ने गरेका छन् ।
केन्द्रका अनुसार गत वर्ष धानको उत्पादनमा गिरावट आएको थियो । बाढीले खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफलसमेत घटेको छ । ३९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३४ हजारमा मात्र धान लगाउने गरिएको छ । प्रतिहेक्टर ३.३ टन धान उत्पादन हुने गरेकामा गत वर्ष बाढीका कारण २.९ मा झरेको थियो । समयमा धान रोपाइँ सकियो र मौसमले साथ दियो भने उत्पादन बढ्ने कृषि प्रचार अधिकृत हरिशंकर जयसवालले बताए । ‘समयमा पानी पर्‍यो र डुबान भएन भने उत्पादन बढ्छ,’ उनले भने, ‘यहाँको मुख्य समस्या भनेको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नु नै हो ।’
रौतहटका किसान किशोर थापाका अनुसार पानीकै कारण खेतमा धानको बीउ सुकेको छ । ‘पानी पर्छ र रोपाइँ गरौंला भनेर कुरेको पनि दुई साता भयो,’ उनले भने, ‘पानीकै समस्याले रोपाइँ हुन सकेको छैन ।’
लामो समयदेखि पानी नपर्दा सर्लाहीका किसान खडेरीको चपेटामा परेका छन् । उखु र मकै डढेर सखाप हुन थालेको छ भने धान रोप्न लगाइएको बीउ पनि सुक्न थालेको छ । दिनभरको चर्को घाम र उच्च तापक्रमका कारण किसानले लगाएको उखु तथा मकै बाली भने सुक्दै गएको हो ।
धान रोप्न राखिएको ब्याड पनि सुक्न थालेको किसानले बताए । कामदार लगाएर भर्खरै गोडमेल गरेका उखु तथा मकै खडेरीका कारण धमाधम सुक्न थालेपछि उनीहरू निराश छन् ।
बीउ हुर्कने बेलामा पानी नपरेर सुक्न थालेको पिपरियाका किसान रामजी साहले बताए । ‘लामो समयदेखि पानी पर्न सकेको छैन, वाग्मती सिँचाइ आयोजनाको पानी पनि समयमा आएन, खेतमा लगाएको उखु र मकै सुक्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘धानको ब्याड पनि पानीकै कारण राम्रोसँग जम्न सकेन, जमेको बीउ पनि सुक्दै छ ।’
असार १५ गते किसानहरूले धान दिवस मनाएका थिए । साता बितिसक्दा पनि रोपाइँमा जुट्न सकेका छैनन् । ‘हामी पानीको बाटो कुरिरहेका छौं, पानी नपर्दा यो वर्ष विजोग हुनेभो,’ स्थानीय किसान रवीन्द्र रायले भने, ‘यो वर्ष खडेरीकै सामना गर्नुपर्छ कि जस्तो लागेको छ ।’ जिल्लामा १० प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको कृषि ज्ञान केन्द्र मलंगवाले जनाएको छ । ‘अन्नको भण्डार मानिएको सर्लाहीमा पानी अभावका कारण रोपाइँ गर्न समस्या भएको छ, आकाशेपानी र वाग्मती सिँचाइ आयोजनाले समयमा पानी छोडेको छैन,’ ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजीव यादवले भने । सर्लाहीमा कुल ६४ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये २३ हजार २ सय हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
(सन्तोष सिंह/धनुषा,शिव पुरी/रौतहट रओमप्रकाश ठाकुर/सर्लाही)
प्रकाशित : असार २४, २०७६ ०८:१४
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारद्वारा पत्रकार महासंघले लगाएको आरोपको खण्डन
आइतबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिएको थियो सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा
स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर खाद्य र अत्यावश्यक उद्योग खोल्न दिइने
समाचार लिंक डिलिट गरिएको विषयमा सम्पादकहरुको आपत्ति
स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे संसद्ले पनि छानबिन गर्नेछ : सांसदहरू
पीपीईको नाममा गाउन बाँड्दै सरकार
संयुक्त राज्य अमेरिका २१६७२२ ५१३७ ८६७२
इटाली ११०५७४ १३१५५ १६८४७
स्पेन ११०२३८ १०,००३ २६७४३
चीन ८२४३१ ३३२२ ७६५७१
जर्मनी ७८११५ ९५९ १९१७५
हाल ९५६५८८ ४८५८३ २०२५४१
अरुणा उप्रेती चैत्र २०, २०७६
कोरोना भाइरसका कारणले हात मिलाउनेहरू नमस्ते गर्न र ठेलमेल गरेर लाइनमा बस्नेहरू केही दूरी राख्न थालेका छन् ।
कोरोनाले सिकाएको पाठ
मल्ल के. सुन्दर चैत्र २०, २०७६
प्रसिद्ध रुसी लेखक लियो टाल्सटायले भनेका छन्, ‘सुखी बन्नु छ भने त्यसका लागि पहिलो सर्त भन्नु नै प्रकृति र मानवबीचको सम्बन्धलाई नभत्काउनु हो ।’
सम्पादकीय : स्वास्थ्यमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि छानबिन होस्
सम्पादकीय चैत्र २०, २०७६
बजार भाउभन्दा निकै बढी मूल्यमा र विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति नै नदिएको परीक्षण किटलगायतका स्वास्थ्य सामग्री ल्याएपछि सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँगको सम्झौता त बुधबार...
‘लकडाउन’ले उब्जाएका केही तरंगहरू
प्रा. नोवल किशोर राई चैत्र २०, २०७६
हाम्रो नेपाल सरकारले ‘लकडाउन’ को घोषणा गर्न अघि नै चैत ३ गतेका दिन हाम्रा छोरीहरू नुमा र निनाम्माले हामीलाई ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’का निम्ति घरबाट कतै नगई...
‘लकडाउन’ मा किसान
चन्द्रकिशोर चैत्र २०, २०७६
जताबाट भात चिसो हुँदै जान्छ प्रायः उतैबाट खाने गरिन्छ । चुल्होबाट ओरालिएको भात पकाउने हाँडी ढिलोचाँडो ठण्डा हुन्छ नै ।